Halkee iyo sida loo ilaaliyo cauliflower jiilaalka cusub muddo dheer guriga: qaboojiyaha, qaboojiyaha ama Maqsin?
Aan tayo lahayn waa in la daaweeyaa, halkii, ma aha sida kaabajka, laakiin sida ubaxyo jilicsan oo qadhaadh. Ma aha oo kaliya in ay ku koraan oo ay sii wadaan, laakiin sidoo kale inay kaydiyaan. Iyo si loo badbaadiyo tayo lahayn jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u kormeerto muddada Bisaylkiisa, laakiin sidoo kale inta lagu jiro kaydinta, iyo sidoo kale ogsoon siyaabo faa'iido leh oo kaa caawin doona inaad "ku noolaato" khudradda tufaaxa ilaa intii suuragal ah.
Maxay yihiin shuruudaha goosashada sprouts Brussels ka hor kaydinta jiilaalka?
Boorashka Brussels waa mid aan la qabin karin beerashada: waxtar ahaan uma baahna dhar kale, hilling iyo waraabinta inta lagu jiro koritaanka. Hase yeeshee, xaaladaha isbedelka dhexe ee xagaaga qabooba, inta badan ma laha waqti ku filan gabowga, sidaa daraadeed had iyo jeer dooro noocyo Bisaylkiisa hore ah marka beeritaanka. Si kor loogu qaado dhalidda, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qanjaruufo (qanjaruufo) dhammaadka bisha Ogos.
Xeerarka iyo shuruudaha kaabajka kohlrabi ee keydinta xilliga jiilaalka
Mararka qaarkood waxaa dhacda in beergooyinku ay noqoto mid cajiib ah, laakiin lama kaydin karo inta lagu jiro kaydinta. Iyo dadaal kasta oo guga-xagaaga hoos loo dhigo. Inkasta oo kohlrabi, sida noocyada kale ee kaabajka ah, waxaad isticmaali kartaa wakhti dheer ka dib markii laga saaro sariirta. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad ogaato dhowr qarsoodi. Biyo qaboojin doonaa - ma dayn doonin?
Khudaarta cusub ilaa guga: sida loo keydiyo kaabajka Maqalka ee xilliga jiilaalka, garaashka, cawska iyo dhulka hoostiisa?
Kaabashka waa khudaar caan ah oo badan oo reer Ruush ah. Waa qayb ka mid ah kaabajka, borscht iyo saladh, sidaas bannaanka sidaas aad rabto in ay u badbaadin for jiilaalka. Meesha ugu fiican ee lagu keydiyo kaabajka xilliga jiilaalka waa maqaasiinka (dhulka hoose). Sida loo keydiyo kaabajka Maqsin ee jiilaalka? Isku dhafka hoose. Qof kasta maahan mid ku haboon kaydinta muddada dheer ee kaabajka.
Waqtiga iyo nidaaminta tayo-goynta ka hor inta aan la kaydin xilliga jiilaalka
Aaladdaha cawsku waxay ku dhowyihiin caanaha sida Ruush cad, laakiin marka la eego waxoogaa fiitamiin, macdan iyo fibre, waxay ku dhow dahay tan dambe. Kaydinta saxda ah ee tayo lahayn ku siinayaa inaad ku badbaadiso xilliga dayrta-qaboobaha dalagga qaaliga ah. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii khudradda si fiican loo koray, iyada oo la raacayo heerarka oo idil, beeralayadu wali waa inay soo qaadaan dhammaan tuunboolka goobta oo leh khasaare yar.
Barafka iyo kaabajka: Ma suurtogal tahay in la qaboojiyo cadceedda xilliga jiilaalka?
Marka xiliga kulul ee diyaarinta xilliga qaboobaha ay tahay mid aad u buuxsameysa, guriga hooyadu waa inay xalliyaan su'aasha ba'an ee keydinta kaabajka cad. Haddii goosashada kaabashku uu yahay guul, ka dibna kaydinteeda muddada dheer waa dhibaato dhab ah. Si aad u ilaaliso kaabajka oo dhan jiilaalka, waxaad ku rid kartaa Maqsin, laakiin haddii, tusaale ahaan, aadan haysan, oo aad leedahay qaboojiye weyn, waxaad ka xakameyn kartaa kaabajka.
Ilaalinta faa'idooyinka: sida loo xaddido kaabajka broccoli xilliga qaboobaha guriga dhexdiisa?
Broccoli waa warshad sannadlaha ah. Broccoli waxaa laga helay iskudhaf dhexdhexaad ah waxaana weeye mid ka mid ah ugudhiga hindhisada iyo qaraabada dhow. Cuntada la cunay ee geedka - burooyinka aan la furin, oo ah "madaxa" cagaar ama guduud.
Xeerarka loogu talagalay barafka carafka ah ee guriga lagu jaro jiilaalka
Boorashka Brussels, marka lagu daro dhadhanka aadka u wanaagsan, sidoo kale wuxuu leeyahay sifooyinka noocaas ah sida faa'iido leh iyo qurxinta oo si firfircoon loogu isticmaalo qurxinta suxuunta. Si aad u isticmaasho khudraddan inta lagu jiro xilliga jiilaalka, waa lagama maarmaan. Ma jari karaa sprouts Brussels xilliga jiilaalka? Cuntada lagu keydin karo alaabta khudradda ah waxaa loo saari karaa hababka ugu doorbidaysan ee kaydintooda xilliga jiilaalka.
Talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay xafladaha: sida loo helo si habboon loogu kaydiyo baradhada peeled?
Baradhadu - mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee la raadsado ee jikada, oo ay jecel yihiin hooyooyinka siday u kala duwan yihiin iyo sahlanaanta diyaargarowga. Iyada oo ku saleysan khudradda this waxaa loo abuuray cuntada sida loogu talagalay suxuunta dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh. Mararka qaar waxay dhacdaa in baradhada diiray oo soo noqnoqday inay ka badan tahay markii ay qaadatay markaad wax karisid, waana wax laga xumaado in la tuuro alaabada.
Astaamaha kaydinta baradhada xilliga qaboobaha ee miisaanka: waa maxay heerkulka, sida loo qalabeeyo qolka?
Badi ahaan beeraleyda qibraduhu waxay ku kaydiyaan baradhada Maqsin xilliga qaboobaha. Qalabka saxda ah ee dhismaha iyo u hoggaansanaanta xeerarka qaarkood, digriiga ayaa ku noolaan doona dhibaato la'aan ilaa guga xaalad aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in huurka badan ama hawada qallalan ay si xun u saameeyaan baradhada. Inta badan, waxaan ku kaydin baradhada Maqsinka.
Mararka qaarkood martigelintu waxay leedahay baahida loo qabo pre-diirka baradho, iyo ma 1-2 qaybood. Gaar ahaan marka ay timaado diyaarinta fasaxa, kaas oo booqan doona marti badan. Marka kaydinta baradhada, waxaad u baahan tahay inaad xasuusnaato in khudradda cagaaran ay aad u dhaqso badan tahay, waxay ku daboolaysaa qolof qallalan oo lumisa dhadhanka marka ay wax ka qabato oksijiinka.
Sida loo dhigo kaabajka caaga ah ee qaboojiyaha ee qaboojiyaha loogu talagalay jiilaalka si sax ah: cuntooyinka iyo hababka
Aaladda beeraha ayaa sannad walba helaya caan ka badan iyo badan. Tani ma ahan wax la yaab leh, maaddaama khudradda ay hodan ku tahay fitamiinada, borotiinka iyo macdanta qudaarta. Waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay saxanka kaabajka ah ee macaan - maraq, maraqa, kaabajka la shiilay, kaabajka la dubay. Iyada oo tayadiisa gaarka ah, khudradda waa mid ka mid ah cunnooyinka ugu wanaagsan ee cunugga ugu horreeya.
Just ee ku saabsan adag: sida loo kaydiyo baradho jiilaalka on balakoonka?
Baradhadu waa qayb muhiim u ah cuntada maalinlaha ah ee qoysaska badan. Maanta waxaad ka heli kartaa cuntooyin badan oo isticmaala khudradan. Intaa waxaa dheer, in badan, alaabtan waxay noqotaa mid muhiim u ah jiilaalka. Marka la eego tan, baradhada waxaa la iibsadaa lana kaydiyaa muddada qabow. Khudaarta mar walba waxay u baahan tahay daaweyn gaar ah, marka ay timaado baradhada, waa inay noqdaan kuwo tinker ah.
Baahida loo qabo badeecooyinka xilliga barafka ah ayaa sare u kacaya sanadka oo dhan. Haddii goobaha kaydinta aan la ogaanin, digriiga way luminayaan dhadhanka iyo tayada, noqdaan kuwo jilicsan, jilicsan oo madow. Si aad u koraan goosashada wanaagsan ee baradhada, waa inaad si adag u shaqeysaa. Waxa kale oo muhiim ah in la siiyo isaga oo leh xaalado raaxo leh kaydinta saxda ah.
Ilaalinta dhadhanka iyo dheefta - miyaad ku kaydin kartaa baradhada cayriin, karsan iyo la shiilay ee qaboojiyaha?
Diiri baradhada ceeriin ee la kariyey iyo sida loo yaqaan, lama kaydin karo wakhti dheer hawada, xitaa qaboojiyaha. Waxay madoobaan, dhoobo, iyo lumiso dhadhanka. Waxaa intaa dheer, baradho kasta, ku xiran nooca wax soo saarka, wuxuu leeyahay xaalado gaar ah iyo nolol shelf. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa sida loo kaydiyo baradho, ogow haddii aad ku kaydin karto qaboojiyaha.
Ma rabtaa inaad ogaato sida loo kaydiyo baradho guri dabaq ah xilliga jiilaalka? Aynu sheegno!
Way adagtahay in la aamino in ku saabsan barandhada, si joogto ah u muuqata miiska ku dhowaad qoys walba, 300 oo sano ka hor oo aan waligood maqlin. Laakiin hadda waa marti rasmi ah sida cunnooyinka maalinlaha ah, iyo casho sharaf. Iyo martida, waa inaan dhahaa, waa mid furfuran. Si loo ilaaliyo dhadhanka iyo sifooyinka wanaagsan, waxay u baahan tahay xaalado gaar ah.
Baradhadu waxay u beddelaan cagaar iyo madow marka la kaydiyo - maxay tani u dhacdaa? Waan fahamsanahay sababaha cudurka
Baradhadu waa khudradda caanka ah ee lagu kaydin karo jiilaalka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jabiso shuruudaha kaydinta, waxaad ka heli kartaa sahayda maqaarka oo aad u aragto inay cagaar yihiin, daboolan yihiin dhibco, ama xitaa loo rogo gray muus. Sida dadka xaafadda xagaaga ah ee u goostay baradhada miraha, iyo macaamiil doonaya in cunto raashin la siiyo, mid waa inuu wax ka qabtaa noocyada kala duwan ee barafka.
Ka ilaalinta baradhada sawir qaadaha: maxaad u baahan tahay inaad ogaato, sidaa daraadeed khudaarta waxay joogtaa mid cusub, dhadhan fiican leh oo caafimaad leh muddo dheer?
Baradhadu waxay caan ku yihiin qoys kasta, waxay ku jiraan suxuuno badan. Waxay cunaan labadaba maalmaha shaqada iyo maalmaha fasaxa. Goosashada khudraddaas waxay dhacdaa hal mar sanadkii, dayrta. Sida loo ilaaliyo baradho guriga ilaa guga, sababta oo ah qoyaan sare, waxay bilaabmaysaa in ay qudhmo, waxay ka cabsanaysaa dhaxan iyo heerkul sare.
Baradhadu waa saxan aan miiska fadaraalku sameyn karin. Qoysas badan, waxaa la cunay hal mar toddobaadkii, iyo xittaa marar badan. Xaaladaha kaydinta ee khudradda waa mid sahlan, uma baahna kharashyo gaar ah oo ha qaadan waqti badan. Waxa ugu muhiimsan waa in la raaco xeerarka qaarkood kadibna baradho cusub ayaa ku farxi doona ilaa guga.
Si aan u lumin goosashada "rootiga labaad" - talooyin ku saabsan abuurista heerkulbeegga ugu wanaagsan ee kaydinta baradhada
Maalmahan, waxaa jira siyaabo badan oo lagu kaydiyo baradhada. Goobta faa'iido leh waxaa jira dad leh dhulkooda ama guryahooda gaarka ah, oo baradho badani ay u sii fududaanayaan. Si digriinku u socdaan si joogto ah ilaa guga laftiisa, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco oo keliya dhowr xeer oo ugu muhiimsani waa heerkulka kaydinta.